Kooxda kubada Bandy ee Somalia oo ka qeyb galaya ciyaaraha aduunka 2015 | Somaliska
Kooxda kubada Bandy ee Somalia oo ka qeyb galaya ciyaaraha aduunka 2015
Dhalinyaradii ka qeyb gashay ciyaaraha aduunka ee Bandy 2014 ee lagu qabtay wadanka Ruushka ayaa hada u tababaranaya sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen ciyaaraha aduunka ee sanadka soo socda lagu qaban doono magaalada Chabarovsk ee isla wadanka Ruushka.
Dhalinyarada oo wareysi dheer siiyay wargeyska Dagens Nyheter ayaa ka hadlay sida ka dib ciyaarihii Ruushka ay noloshooda isku badashay. Waxay ka hadleen in ciyaaraha Bandy ay ka barteen muhiimada dadaalka iyo in qofku uu yeesho gool. Hada ayaa goolkooda yahay in ay ka qeyb galaan ciyaaraha la qaban doono 2015. Iyagoo doonaya in ay waqtigaas noqdaan kuwo sare u qaaday xirfadooda isla markaana ay badiyaan qaar ka mid ah ciyaaraha.
Waxay ka hadleen in kooxahii ay kula tartameen ruushka sanadkaan aysan ahayn kuwo wax badan ka fiican balse iyaga ay la hadhay maadaama aysan barafka ku ordi karin. Hada ayay asbuucii dhowr jeer tababar sameeyaan.
Dhalinyarada ayaa ka warbixiyay sidii ay cabsida uga qabeen wadanka Ruushka iyo cunsuriyiinta balse waxay sheegeen in ay la yaab ku noqotay soo dhaweynta ay kala kulmeen ruushka iyo in taageerada kooxda Somalia ay ahayd mida ugu balaaran.
Barnaamijka ay ku dhaqaaqeen dhalinyaradaan ayaan ahayn oo keliya mid ciyaar ah balse waxa uu wax ka badalay aragtida dadka ku nool Borlänge ay ka haystaan Soomaalida, iyagoo ka waramay in hada magaalada dhan ay siyaaday farxada iyo isku soo dhawaashaha dadka.
Dhinaca kale, Filimkii ku saabsanaa mashruucaan ee ay samaynayeen labada nin ee caanka ah Filip iyo Fredrik ee qorshaha ahaa in uu soo baxo bisha soo socota ayaa dib loo dhigay ilaa sanadka dambe maadaama ay doonayaan in ay ku daraan qeyb ka hadlaysa mid ka mid ah dhalinyarada oo u safraya wadanka Uganda si uu ula kulmo hooyadiis oo loo diiday in lala mideeyo.
Waxaan u rajaynayaa GUUL sanadka 2015. Insha Allah
Sweden oo diyaarad kormeerta u diraysa qaxootiga doomaha
Baarlamaanka Sweden oo ka doodaya arimaha Soomaalida
Dad badan waxay moodaan in dhalinta Soomaaliyeed wax fiican loo sameeyay laakiin sidaas maahan arintu …. Waxaani waa Qandaraas lacag ku qaadanayaan nimankaan fekerka wata…
Imisaa cauurtaan waxbarashadoodii iskooladii ka haray ? 7 Beri Tababar ah miyuu ka bixi karaa arday ISKOOL dhigta Mustaqbalkooda Anfaci meyso BANDY ,,
Imisaa ilmahaan la fasahaadiyay oo ** night club** la geeyay , isla magaaladaan ayaa habeenadii la geeyaa , ruushka markeey aadeena sidaas oo kale ayaa night club loo geeyay….
Markaa Jimcaale walaal anigoo ku xushmeynaa , laakiin wax badan ayaa cauurtaan laga fasahaadiyay…
waa ku salamay walalkey, waxa rajeena ina tahy walalkii wanaagsanaa oo su,alaha qeybta somaliska wadaagi jirnay ama wa qaldanahy,
si walbo qoraalkan mesha ku yaalo farxada feedan ah, waxa iga sii yaabiyay qoraalkaga oo aadka u macquul ah, waayo wax walbo ujeedo ayaa ka danbeeso, waana mida mida aad ka dhawaajisay….
Calanka Buluuga aad babiso, iyo S somali aad ku dheesho, waxa ka qiimo badan Diintada iyo mustaqbalkaga oo aad ilaaliso…..
Asc wr dhaman Aqristayaasha safxadan ee Somaliska.com.
Axya wadani iyo xamdi aad ayaan ugu faraxsanahay Fikaradiina. kow walaalkey Axyawadani waxaan dhihi lahaa Ilaahay hakuu kordhiyo aqoontaada iyo aragtida dheer oo aad waliba Diina iyo caqiidada u cuskatay. iyo walaasheey ku taageertay. waa runtaa. iyo waxaad arkeysid oo aan dadka oo dhan arkeynin, taasna ilaahay ayaa bixiya, indhaha labada ah wax laguma arko ee ilahay wuxuu qofka mu’minka ah siiyay indho lake uu wax ku arko. Fiiri aayada 46 ee suratul Xaj. marka qof qalbigiisa aan wax ka arkin indhaha kaliya waxba uma taraan, marka waxaan dhihi lahaa Ilaahay xaqa hana tuso hana nagu hanuuniyo hadaan Somali nahay.
waan ku faraxsanahay dhalin yaradan shaqada hey hayan waa mid somali oo dhan sharaf u ah kana bedeli karta fikrada qaldan ee nala aminsan yahay xita waxay sharaf u tahay qarada afriko waxay cadeyn donta in aan nahay dad horomarka jecel in aan nahay insha allah dhalin yaradan iyo inta somali sharafdeeda bad baadisaba illah waxa ey jecelyihin ha siiyo wadani dhaba allow dhow
Mahadsanidiin dhammaantiin walaalayaal.
Xamdi walaal waa isagii walaalkaan , walaale ABUBAKAR iyo XAMDI ,
Calanka Somalia , waa maro aakhirana qofka waxba ugama taro.
Imisaa Calankaan awgiis dad danbi u gala oo dumar iyo ragg isku dhex gala , eeg kaliya kidka Somaliland (Waqooyi Galbeed ) imisaa dartiis danbi loo galaa.
Ilmahaan waa masaakiin hadda AFRIKA ka timid , oo QANDARAAS la geliyay , waxaana waa wax ragg kale wataan , markaa waalidkoodii islahaa ilmahaaga Diintiisa Dhowro waxna hakuu Barto, ma u talin karo …
Allaah ayaan ka baryaynaa inuu wax wanaagsan walaalaheen waafajiyo , dantoodana garansiiyo…
Walaalayaal nimankaas raggii wayba sii dhaafeen hadda waxay wadaan KOOX GABDHO ah !!!
Halkaas ayay maree hawshu ,, waana wax lagu doonaa in caruurta SOOMAALIYEED lagu fasahaadiyo…